Mametraka izahay tsy manindry ny fahatakarana ny fepetra arahana sy ny mpanjifa kalitao takiana, ny fampiharana ny fanaraha-maso mety sy mamokatra ny ampahany voalohany indrindra ny fotoana.
Ambony izany fitsipika izany eo amin'ny kalitao no tratra ka hatrany amin'ny alalan'ny foto-drafitrasa mafy izay ahitana fitaovana fandrefesana farany toy ny Air Gauges & hafa tsy tapaka fitaovana fandrefesana calibrated dalàna. Niteraka Gauges, Micrometer, sns Verniers manana toerana ny CMM, profil fandefasana sy fitsapana manokana e. Ny fanoloran-Quality dia ny hoe ny fifandraisana rehetra atao ao amin'ny orinasa mpamokatra entana Ruizheng fametrahana mazava Machining dia voamarina ny ISO 9001: 2000. Miaraka amin'ny fitaovana fandrefesana mandroso indrindra sy ny mpanao asa tanana za-draharaha indrindra mba hanome mpanjifa amin'ny ambony indrindra eran--fahombiazana, ambony indrindra-toe-karena, ary ny ambony indrindra -quality vokatra.
Quality Control Fepetra
- Total Quality fitantanana (TQM)
- mitohy Improvement Program
- Fanofanana mpiasa Programs
- mitsangana fampidirana ny fomba fiasa
- Fampiasam-bola any amin'ny farany Quality Control Equipment
- Quality Fepetra Programs
- ny fomba fandaminan-Fanoloran-tena ho Quality
Avy amin'i Raw Material Incoming ny fandefasana entana, dia mitantana ny dingana rehetra ao amin'ny orinasa mpamokatra entana dingana ho antoka entana natao ho an'ny mpanjifa fepetra arahana, entana rehetra tsy maintsy mandeha amin'ny alalan'ny taratasim-bola 4 ao amin'ny dingana rehetra:
Raw maso ara-nofo
amin'ny fikarakarana maso
Nanizingizina fa ny tsara no laharam-pahamehana, ary ny fampiharana ny ISO9001: 2000, ny penitra ny kalitaon'ny rafitra sy ny fahamarinan-toerana tsara efa nahazo antsika ny matoky ny mpanjifa nandritra ny taona maro. Ruizheng fametrahana mazava Machining afaka manampy anao tsara hahazoana ny avo indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra amin'ny alalan'ny OUTSOURCING ny orinasa mpamokatra entana any Shina.